ဒါကြောင့်စျေးကြီးဖြစ်ရမည်? ပြင်ပမြို့ရိုးကိုအသွင်အ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ပစ္စုပ္ပန်မှာထိုင်ဝမ်ရဲ့ဗိသုကာများ၏အများဆုံးအရေးတကြီးလိုအပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြင်မြို့ရိုးကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး, ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားငလျင်၏မုန်တိုင်းအလွန်မကြာခဏဖြစ်တယ်, ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောဖြစ်ပါသည်, မြေကြီးလှုပ်ခြင်း, အစိုဓာတ်နှင့်ပင်လယ်ဆားစံကျော်လွန်နေကြလို့ပဲ။ ဤရွေ့ကားအဟောင်းအဆောက်အဦးများဖျက်ဆီးများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းအများအပြားအပြင်ပန်းရိုးကိုကွက်များ, mottled ချွတ်ယွင်းကျဆင်းသွားခဲ့ကြ, မကြာခဏမိုးရွာရွာ tiled ။ အသွင်အပြင်ညစ်ပတ်နဲ့ရုပ်ဆိုးသည်ဆိုပါက, ကအနိုင်နိုင်သည်းခံနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုလူတွေနေ့တိုင်းစိတ်မပူပါနဲ့စေသည်အဆောက်အအုံအလွှာကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ဘိလပ်မြေ calcification မှပယ် peeled နှင့်လေးနက်သောသို့မဟုတ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံယိုယွင်းဆိုးရွားလျက်ရှိသည်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူကူးခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေရာချထားဘို့, လုံခြုံဖြစ်ခြင်း၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှုရှိပါ!
သို့သော်ပြင်မြို့ရိုးပေါ်မှာအရေပြားဆွဲထုတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို, စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထို့အပြင်အရေပြား၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုမြေတပြင်လုံးအဆောက်အဦး၏နေထိုင်သူများအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ရပါမည်, ထိုသို့အမျိုးမျိုးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်ချောချောမွေ့မွေ့ထွက်သယ်ဆောင်ရန်မကြာခဏမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ပုံစံ - 6-1-01